Ny faran'ny Apple? Efa hitako ity sarimihetsika ity | Vaovao IPhone
Luis Padilla | | iPhone, About us
Ao anatin'ny vanim-potoana izay misy manam-pahaizana maro ahiana handray ny baolina kristaly ary haminavina ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny vokatra iray, na koa ny orinasa iray. Miorina amin'ny tsy misy mahalala, maminavina ny fahombiazana na ny tsy fahombiazan'ny vokatra vaovao izy ireo, ary indraindray misy vokany mivantana amin'ny fanapahan-kevitry ny filankevi-pitantanana na koa amin'ny lanjan'ny tsenan'ilay orinasa. Ny ohatra farany ananantsika ao amin'i Peter Thiel "nohazavaina", izay naminavina (toa ny maro hafa nandritra ny taona maro) ny faran'ny Apple. Rehefa manam-pahaizana toa an'i Thiel no nilaza an'izany dia tsy maintsy hino izy ireo, na mieritreritra isika olombelona mety maty, fa azo itokisana ve ireo faminaniana ireo? Manararaotra ny tsingerintaona nanolorana ny iPhone dia hijery ireo vinavinan'ny manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany alohan'ny fanombohan'ny Apple vaovao.
1 Steve Ballmer, tale jeneralin'ny Microsoft
2 TechCrunch, ho very maina ny efijery mikasika
3 Nokia: tsy manova ny fomba fisainantsika io.
4 John Dvorak, iray hafa nohazavaina
5 Peter Thiel, Apple dia ho faty tsy ho ela
Steve Ballmer, tale jeneralin'ny Microsoft
Ity horonan-tsary ity dia saika nalaza toy ilay tamin'ny fampisehoana iPhone. Steve Ballmer no antony nahatonga ny CEO an'ny Microsoft tamin'izay, ary nanontaniana izy momba ilay finday smartphone vaovao natombok'i Apple.
Tsy misy ny vintana fa hahazo fizarana tsena lehibe ny iPhone. Finday avo lenta izy io, lafo loatra. Apple dia mety mahazo vola be amin'izany, fa raha mijery ireo smartphone 1300 miliara amidy isan-taona ianao dia aleoko manana ny rindrambaiko amin'ny 60-70% amin'izy ireo fa tsy manana 2-3% fotsiny, izay mety ho vitan'i Apple.
Ny angona farany noresahinay 11,5% ny tsenan'ny iPhone, raha milentika kosa ny Windows Phone miaraka amin'ny 0,4%.
TechCrunch, ho very maina ny efijery mikasika
Ny iray amin'ireo tranonkala manan-danja indrindra amin'ny fotoana ao anatin'ny sehatry ny haitao dia nilaza izany ny iPhone dia efa nivoaka talohan'ny fotoanany ary ho very maina tanteraka ny efijery mikasika.
Io fitendry virtoaly io dia tena ilaina amin'ny famaliana ny mailaka na ny hafatra toy ny telefaona kodia. Aza avela hisy ho gaga raha misy ampahany manan-danja amin'ireo mpividy iPhone manenina izany ary miverina amin'ny BlackBerry rehefa afaka adiny iray manandrana mamaly amin'ny mailaka.
Heveriko fa tsy misy kely azo ampiana ireo teny ireo. Olona an-tapitrisany no tsy mamaly mailaka na hafatra fotsiny, fa hafatra an-tapitrisany no voasoratra ao amin'ny WhsatsApp na Telegram, ary lahatsoratra an'arivony amin'ny pejin-tranonkala toy ny TechCrunch no voasoratra avy amin'ny kitendry virtoaly.
Nokia: tsy manova ny fomba fisainantsika io.
Nokia no mpanamboatra telefaona finday lehibe indrindra tamin'izany fotoana izany, ary ny tale jeneraliny tamin'izany dia i Olli-Pekka Kallasvuo, izay noraisiny tamin'ny tsy fandanjalanjana tanteraka ny iPhone.
Heveriko fa ny zavatra nasehon'i Apple tamintsika dia midika fiovana eo amin'ny hevitsika momba ny rindrambaiko sy ny maodely ho antsika.
Fantatsika rehetra ny dikan'io "tsy fanovana ny hevitrao" io ho an'i Nokia na eo aza ny fitakiana an-taonany maro ny tsena sy ny mpampiasa azy. Nividy i Microsoft ary nidina an-tsokosoko.
John Dvorak, iray hafa nohazavaina
Ny tantara dia feno olona manazava toa an'i Peter Thiel voalaza etsy ambony, ary ny iray amin'ireo manamarika indrindra dia John Dvorak, manam-pahaizana momba ny haitao, mpanao gazety ary podcaster izay manam-pahaizana momba ny solosaina sy gadget, fa raha ny amin'ny vinavinan'ny toetr'andro dia naseho tamina fotoana maromaro fa tsara kokoa ny mijanona ao an-trano. Rehefa natomboka ny iPhone dia nilaza izy fa miadana loatra i Apple ka tsy hahomby amin'ity tontolo ity.
Ny olana eto dia na dia afaka milalao lamaody sy orinasa hafa aza i Apple, dia tsy misy porofo fa afaka manao izany haingana be izy. Ireo telefaona ireo dia tonga ary mandeha haingana ka raha tsy hoe Apple dia manana telefaona am-polony hafa vonona handeha, ny telefaonanao, na dia mahomby aza, dia ho lany andro ao anatin'ny telo volana.
Tsy misy ny mety hahombiazan'i Apple amin'ny orinasa mpifaninana toy izany. Na dia amin'ny orinasa iray izay naha mpisava lalana mazava azy toa ny solosaina manokana dia voatery nifaninana tamin'i Microsoft izy ary manana anjaran-tsena 5% fotsiny.
Peter Thiel, Apple dia ho faty tsy ho ela
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny WSJ, i Peter Thiel (mpampiasa vola nanakorontana ny PayPal ary nampiasa vola tamin'ny Facebook tany am-piandohana) dia manome toky fa Tapitra ny taonan'ny Apple, miorina amin'ny zava-misy fa tsy manana fivoarana azo atao intsony ny tsenan'ny smartphone.
Voamarina. Fantatray hoe toy ny ahoana ny smartphone ary inona no asany. Tsy avy amin'i Tim Cook io, fa tsy faritra izay hisian'ny fanavaozana bebe kokoa.
Rehefa mamaky ireo teny ireo ianao dia ny zavatra eritreretinao voalohany dia maninona no mifantoka amin'ny Apple, satria raha efa tapitra ny tsenan'ny smartphone dia misy orinasa hafa toa Samsung, HTC, LG… handalo izany ratsy ihany koa. Fa raha mijanona kely kokoa isika, dia fitaovana matotra nanjary mpiara-miasa tsy afa-misaraka amintsika, izay efa manao ny asantsika rehetra, ary mamela ny solosaina saika nilaozany (ary melohina), efa voatokana tsy hivoarana intsony ve? Heveriko fa tsy izaho irery no misalasala an'io fanambarana io. Fa ny fotoana ihany no hahalalantsika raha ao amin'ny fanambaran'ny olona iray nohazavaina toa ilay voatanisa teo aloha isika, na raha toa izy ka clairvoyant tena mialoha ny androny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Ny faran'ny Apple? Efa hitako ity sarimihetsika ity
Heveriko fa tsy midika izany fa hanjavona i Apple, fa manondro izay noeritreretin'ny maro amintsika hatry ny ela, ary izany dia mijanona i Apple. Ny gadget "vaovao" rehetra noforoninao dia tsy inona fa ny fanavaozana - restylings - vintage. Very io fikasihana "wow" io taloha ela be. Ny fanavaozana. Manamarika ny lalana. Ny fanehoan-kevitr'ireo manam-pahaizana momba ny iPhone voalohany, satria manana fanazavana marobe izy ireo, fa ho ahy ny tena lehibe dia ny tahotra, ny tahotra ny fahafantarana fa ny nanolotra dia hanova an'izao tontolo izao. Ary fantatr'izy ireo izany, na toy inona na toy inona nanehoan'izy ireo raha tsy izany. Hey, tsy mora ny mitarika ny haitao sy ny fanavaozana manerantany, mazava ho azy, ary mihabe ny fifaninanana. Saingy heveriko fa ny taona vitsivitsy lasa izay dia nanary ny fahalianan'ny Apple hanao zavatra "legend" izy ary nirona kokoa hanao l € y € nda.
Tsara ny fanangonana gaffe, saingy sarotra ny mijanona ela be toy izany. S2
Mamaly an'i elpaci
Alberto de moya dia hoy izy:
rehefa maty ilay mpanavao, maty ny fanavaozana, mila mpamorona sahy tsy misy tahotra maika ny paoma
Valiny tamin'i Alberto De Moya
Ireo patanty ireo dia manambara ny fomba fiasan'ny AirPods sy ny Bluetooth